Shariif Xasan oo weji gabax kala kulmay shacabka magaalada Xudur iyo ciidamada halkaas ku sugan
arlaadi October 30, 2018 No Comments
Ayada oo ay maalmahaanba ku sugnaayeen magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wasiiro ka horudhac u ahaa musharax Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada Koonfur galbeed, ayaa waxaa guuldaro kusoo idlaaday safarkii wasiirada.
Wasiirada oo kala ahaa wasiirka warfaafinta ugaas Xasan, wasiirka cadaalada Ibraahim Lugbuur iyo wasiir kuxigeenka xanaanada iyo xoolaha ayaa goor dhow diyaarad kasoo raacay magaalada Xudur ayada oo ay shacabka magaaladaas iyo ciidamadooduba ka hor yimaadeen inuu halkaas soo gaaro madaxweynaha xiligiisu dhamaaday ee Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan si uu ol’olihiisa doorasho ugu qabto halkaas.
Shacabka gobolka Bakool iyo ciidamadooda oo dayac baahsan kala kulmay maamulka waqtigiisu dhamaaday ee Koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in Shariif Xasan uusan waxba u qaban hadana aysan raali ka noqoneynin inuu mar kale ol’ole ka bilaabo gobolkooda iskunasoo sharaxo xilka madaxtinimada maamulkaas.
Wasiirada ka socday Shariif Xasan ayaa waxa ay cabasho ula tageen ciidamada AMISOM ee Itoobiya si ay usoo farageliyaan arintaas balse waxa ay ciidamada Itoobiya sheegeen inaysan ciidamo fara badan iyo shacabka magaalada ku qasbi karin inay soo dhoweeyaan Shariif Xasan sidaas darteena ay raali ka noqdaan.
Wasiirada maanta dib ugusoo noqday magaalada Baydhaba ayaa horay ulasoo laabtay kaartoono ay ku jireen stiikaro, funaanado iyo koofiyado uu ku sawiranyahay Shariif Xasan oo mar kale hami ka qabo inuu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed.
Diidmada reer Bakool ee ah inuu Shariif Xasan kusoo dego magaalada Xudur ayaa waxa ay dharbaaxo siyaasadeed ku noqoneysaa todobaatan jirkaan mudo 15 sano ah soo ahaa jookarka siyaasada Soomaaliya isaga oo inta badan doontiisa u weecin jiray dhanka ay dabeyshu u socoto balse xiligaan ayaan la ogeyn halka uu doonta u weecin doono maadaama ay ku wareegsanyihiin jawiyo siyaasadeed oo mugdi badan noqon karana kuwii ka saari lahaa saaxada siyaasada Soomaaliya.
Odorasayaassha Soomaaliya waxa ay qabaan inay markani adagtahay sidii uu Shariif Xasan ugusii jiri lahaa siyaasada Soomaaliya walow ay kuwa kalena leeyihiin haddii uu bad baado Shariifku markaan waxaa adkaan doonta in mar dambe la haweysto siyaasadiisa kana dhigi karto Mugaabaha Soomaaliya.